आज मिति २०७७ साल फागुन १५ गते शनिबार, तपाइकाे राशिफल कस्ताे रहला ? – ThePressNepal
आज मिति २०७७ साल फागुन १५ गते शनिबार, तपाइकाे राशिफल कस्ताे रहला ?
आज मिति २०७७ साल फागुन १५ गते शनिबार तदनुसार सन २०२१ फेब्रुअरी महिनाको २७ तारिख, माघ शुक्ल पक्ष, शिशिर रितु, उत्तरायण सुर्य, मघा नक्षत्र, पूर्णिमा तिथी, सुकर्म योग, बब करण, आज चन्द«मा सिंह राशीमा रहनेछ, आजको अभिजित मूहूर्त बिहानको ११ बजेर ५४ मिनेटबाट १२ बजेर ४० मिनेटसम्म रहनेछ । आजको अमृत समय दिउँसोको ३ बजेर ९ मिनेटबाट ४ बजेर ३५ मिनेटसम्म रहनेछ । आजको राहुकाल बिहानको ९ बजेर २४ मिनेटबाट १० बजेर ५० मिनेटसम्म रहने छ। राहुकालमा दीर्घकालसम्म असर पर्ने खालका शुभ कार्यहरु शुरु गर्नु हुदैन । यो राहुकाल समय नेपालको लागि मात्र हो, देश अनुसार राहुकाल समय पनि फरक हुन्छ ।
पराक्रम बढने, शरीरमा निरोगीताको अनुभूति हुने, वस्त्र लाभ, आर्थिक लाभ तथा लाभकारी घटनाहरु हुन सक्नेछन । मित्र सुख, स्त्रि सुख, दाम्पत्य सुख, मिठो खानपान र रमाइलोसँग समय बित्ने योग छ । अरुले तँपाइको प्रशंसा गर्न सक्नेछन । पदोन्नतिको सम्भावता, मानसम्मान पाइने, शत्रुमाथि विजय, सन्तानपक्षबाट सुख । रोग र ऋणबाट राहतप्राप्तहुने । विद्यार्थीवर्गलाई समय राम्रो रहनेछ । व्यापार व्यवसाय र लगानीको लागि पनि आज दिन राम्रो छ ।
सचेत हुनुपर्ने दिन छ । कुनै पनि प्रकारको विवादबाट आज बच्नु होला, खर्चमाथि नियन्त्रण जरुरी छ , हानी नोक्सानी हुन नदिन आज सावधान हुनुपर्ने दिन छ, काम गर्दा अलि होश पुरयाउनु पर्ने दिन छ । दुष्ट खराब मान्छेहरुसँग भने टाढा रहनु होला र दुराचार कर्म र घमन्डबाट चाँही जोगिनु पर्ने दिन छ । मानसिक तनाव नलिइ मनलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नु भएको खन्डमा दिन सजिलो जानेछ ।
Previous नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्व पाचँ प्रधानमन्त्री मध्येक एककै पालो , पार्टिको आधिकारीकता नटुङ्गिदा खेल अझ रोचक बन्ने निश्चित
Next आंशिक बदली रही केही भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया बदली रहने